Abanikazi onobuhle zakudala AvtoVAZ azi kahle ukuthi amabhuleki kulezi izimoto Ushiye kakhulu njalo okufanele oyifunayo, okufaka "isikhombisa". Isimo kungathuthukiswa. Ukuze wenze lokhu, setha ezingemuva disc ukunqanda Vaz-2107. Bheka ukuphumelela kwalezi amasistimu kuwo wonke umuntu ezaziwayo. Ngakho-ke, abanikazi imoto ngokuvamile ukushintsha sigubhu unit disc wabo nozakwabo.
Inqubo kungenziwa ngokuzimela. Kodwa uqaphele ukuthi inqubo isikhathi ngempela oqothulayo. Ngaphezu kwalokho, lo msebenzi kuyodingeka imishini ekhethekile. Kodwa i- "zabuna" abanikazi, ayikho into engenakwenzeka.
Engemuva disc ukunqanda Vaz-2107 aphumelela kakhudlwana. Yingakho ngemva kokumiswa ezingemuva isondo pair kuyodingeka olunye ulungise ingcindezi phezu kwengungu ukubopha. Uma ungaphenduki, kuyobahambela kuneNingizimu ngaphambili. Lokhu kungadala skidding. Ukuze ukufakwa kuyodingeka lokufeza Welding, kanye Milling futhi lathe umsebenzi. Sicela uqaphele ukuthi imoto, okuyinto wenza izinguquko design onjalo, ngeke bakwazi baphumelele ekuhlolweni. Nokho-ke, kufanele kuqashelwe ukuthi kokungenela ohlelweni unyathela amabhuleki yemoto - sekuyinto umcimbi eyingozi. Uma kukhona ukungabi nethemba ukutholakala afaneleyo, khona-ke kungcono ukushiya umbono wokuzilimaza ukufaka disc ukunqanda Vaz futhi ukuphathisa lo msebenzi ukuze ochwepheshe.
Izinzuzo isixazululo Vaz-2107
Uma wonke umsebenzi esikhundleni izakhi sigubhu ku disc wabo nozakwabo kwenziwe kahle futhi efanele, ukusebenza isistimu ngcono kakhulu. Phakathi izinzuzo lezo zinguquko kungenziwa isehlane kahle eliphezulu ngesikhathi unyathela amabhuleki.
Uma ngcono ukupholisa ngemoto, lesi simiso sizonikeza ukusebenza onokwethenjelwa ngaphansi ukusetshenziswa esindayo. On disc amabhuleki, ngokungafani nozakwabo sigubhu, akusho buthelela umswakama. It kwehlisa ukusebenza kwenqubo unyathela amabhuleki. Ebusika, ngenxa amabhuleki wakhe kungaba "ukubophela." oluvala amasondo engemuva ikhiyiwe.
nezinto ezidingekayo kanye ezidingekayo
Ukufaka disc amabhuleki kwi oluvala amasondo ezingemuva Vaz-2107 uzodinga imishini ezinye. Lokhu ingxenye yomugqa in inani izingcezu ezimbili, ephelele izindandatho esaziwa, izimvu zamanzi, futhi amabombo. Enye ukuthenga noma uthole ukwesekwa kanye namasondo kusukela Vaz-2108. Kodwa ungakwazi ukusebenzisa amanye amasethi. Udinga fasteners. Lokhu imishudo obandayo ukuze calipers ukubopha, washers ahlukahlukene namantongomane, izibopho. Futhi ukuthola spacers ngoba amasondo phambi kanye kubakaki obandayo ukuze calipers ukubopha. izingxenye ezinjalo lekufanele akhicitwe ngamunye.
Mayelana master isilinda
Uhlelo lokuqala kudingeka kancane ukushintsha. Ungenza lokhu nge budget encane, noma ukuthenga izingxenye ezibizayo - ukwesekwa nokucindezelwa nabalawuli. Kodwa okokuqala kudingeka esikhundleni master isilinda. Ingcindezi ukuthi ungadala, akuyona amandla ikakhulukazi ezinkulu. Futhi ngokuya nokwethenjelwa akukuhle kakhulu.
Kukanjani sokulungiswa amabhuleki labaqaphi elingemuva? Disc (VAZ-2107) zedivayisi ehloselwe phambi nentaba sibuyekeze. Lapha Bathembele yokuthi imoto ngemuva zonke izinguquko ngeke ukugibela amasondo 14 noma-15-intshi. Mhlawumbe ibizwa akhishwe ibhajethi, kungase kubonakale sengathi ezingadingekile. Nokho, lokhu akukhona ngenxa yezizathu tebuciko kuphela. Intuthuko elihlobene ne ukuzinza kanye driveability. Inketho engcono kulokhu esikhundleni imikhiqizo okujwayelekile isethi phambi phambi amabhuleki Vaz-2112. Lokhu ikhithi kufanelekile namasondo angu 14 inch. Ngaphezu kwalokho, oshayelayo kuleli cala - umoya. Ungakhetha futhi enye isethi ezingemuva disc ukunqanda Vaz-2107. Ngokuphathelene calipers, isethi zonke izakhi njalo Vaz-2112. Amadiski angathengwa wadla noma kunoma iyiphi enye okukhethayo. Kodwa ukukhiqizwa badla - umoya futhi inkatho. Lezi akwazi ukugcina azosethwa ngokuphelele ngaphambili ihabhu ngaphandle kokushintshwa ezengeziwe. Ukufakwa kwale ikhithi uzodinga ukwenza izibalo kanye oda (noma uyenze eyakho) ukukhweza ukwesekwa. Umi ngasizathu simbe bengakwamukeli. Umnikazi okwesikhathi ukwesekwa kudingeka ibe ukushuba amamilimitha angu akukho kuka 5-7. Kwenze okungcono ngensimbi noma titanium. On ukudayiswa ungabheka imikhiqizo ngomumo eyenziwe. Ipheya zalapho enjalo izobiza $ 50.
On the amabhuleki ezingemuva: yini ukuthenga?
Ngaphambili, FIAT-124 has ezingemuva disc amabhuleki, kodwa uma imodeli waqala kakade kukhiqizwa ngesikhathi zokuthutha yasekhaya okuthile kubo ngenxa yezizathu eziningana anquma ukuba sisuke kuleli. Ake sibone ukuthi yikuphi okunye sidinga ukuya ezingemuva disc ukunqanda Vaz-2107. Okokuqala, udinga ukuthenga iqoqo ukunqanda sha badla. Kodwa kungenzeka ukuthenga futhi inguqulo ezibizayo. Lokhu Disk Amandla kusuka brand efanayo. Nakuba ukusebenza kwe akusiyo ezahlukene kakhulu kusukela analogue eshibhile.
Ukufakwa ezingemuva disc ukunqanda Vaz-2107 kudinga inkatho emuva isigamu yomugqa drive kokwehla osayizi. Kungcono oda lo msebenzi nganoma iyiphi uhlobo izitshalo noma umsebenzi ezimbonini yangasese. Le ndlela kuqinisekisa ukunemba okuphezulu ngezindleko iphansana. Njengoba kunjalo nge amabhuleki front kuyodingeka ukubala futhi ukukhiqiza adaptha angajwayelekile for obandayo caliper labaqaphi elingemuva. Kukholakala ukuthi adapters efanelekayo ziyefana masondo phambi. Kanye ukufakwa ezingemuva disc ukubopha Kunconywa ukuba esikhundleni amabombo e-eksisi eqonde ngqo. Ngokwesibonelo, umkhiqizo kahle kungase kutholakale kusukela umakhi SKF.
Ukufakwa inqubo Ukudilizwa
Isinyathelo sokuqala ukuqaqa oluvala amasondo kuya oluvala amasondo labaqaphi elingemuva. Khona-ke kahle ukuhlanza izingxenye. Ungakwazi geza e uphethiloli noma kaphalafini. Kodwa uma kukhona ingxenye yomugqa entsha, ungavele aphonse ubudala. Khona-ke, uhlelo ukubopha amuncekela ketshezi. Okulandelayo adiliza noma izingxenye ukubopha sigubhu. Badinga kuphela shiya tube. Khona-ke ukususa retaining ring futhi ususe eziveza isondo. Lokhu kungenziwa kuphela usebenzisa cindezela. I ring senziwa ngendlela yokuthi umthwalo izinyembezi-off ilingana amathani amahlanu. Ungenza ngaphandle cindezela. Izindandatho nje barbarously banqunywa ngokusahwa grinder. Kodwa kumelwe senze kanjalo ilimaze oluvala amasondo kushaft uqobo. Sawing akuyona kuze kube sekupheleni. Ngaphezu kwalokho, ukuhlukaniswa ikhale a ishizolo, futhi sihlobene iyasuswa. Semiaxis kumelwe udle kuya kwangaphakathi wathwala ububanzi we akwazi ukugcina ukubopha.
Ukufakwa disk ku inhlangano phansi
Phambi kwenhlangano izobanjelwa semi izimbazo, yonke imininingwane kunconywa ukugeza kahle futhi ohlanzekile uphethiloli. Khona-ke ukusungula semiaxes idasta angenziwanga ejwayelekile obandayo ubakaki caliper futhi uhlawula indandatho. Okulandelayo wageza eziveza axis. Khona-ke element nivame ocindezelwe ungene kushaft oluvala amasondo. Lokhu arcade kwenziwa usebenzisa Scrap ipayipi. Ukuthela icindezelwa ku uyisivalo. I tube kumele abe ubukhulu kangangokuthi waphumula kwangaphakathi indandatho esindayo.
inqubo Ukujoyina kanje. Leli payipi usemahlombe indandatho, kodwa ngalesi sikhathi ngesando hit ngakolunye ekupheleni. Kufanele sithathe ipayipi ngendlela lefanele setha. It akufanele Abut iringi elingaphandle esindayo. Khona-ke qiniseka ukuthi sihlobene kokwehla kuyinto enokwethenjelwa futhi kahle. Ngokulandelayo, shisisa circlip. Kwembulunga kudingeka hot kakhulu. Khona-ke indandatho ogibele kushaft. Uma-ke ihlala phansi ngokungathandi athukulule, sinqume futhi ufake entsha. Ngokuvamile, into uthola okubi ngenxa Ukushisa enganele. Idinga ithoshi enamandla. Lapho iringi selupholile, a spacer ukukhwezwa ngqo ukubopha disc. Manje uhlala kuphela ukusungula phansi eqoqwe kuma imoto, ukuhlanganisa ukwesekwa bese uxhuma ezingemuva disc ukunqanda Vaz-2107 uhlelo.
Nakuba kukhona nhlobo nobunzima uxhumano. Disc amabhuleki asetshenziswa esigcwele onguthelawayeka. Futhi, ungakhohlwa mayelana "umthakathi". Lokhu ukulawula unyathela amabhuleki amandla. Uma wakhe Vaz-2107 ngasizathu simbe ungaphenduki, khona-ke kumelwe siqiniseke ukuyibuyisa. Kungenjalo, amandla izodluliselwa Ukuboshelwa. Ngenxa yalokho, bakhulise disc amabhuleki izoqaliswa ngaphambi phambi. ukususa Abaningi "umthakathi 'bese ezisola. Uma ezingemuva ukubopha bamba phambi phambi, okwandisa ingozi skidding-eksisi imoto. Futhi kulokhu, uhlelo ukubopha ngeke neze Ishisa futhi uzokhathala ngokushesha. Ilungu zisusiwe, kuya nekusebenta enkulu amabhuleki. Kodwa eqinisweni kungekho nomphumela. Kungcono ubuyise into endaweni ifektri.
Disc amabhuleki kanye yokupaka
Kusukela izakhi ukufakwa disc kudinga exclusion mechanical yokupaka ukubopha actuator, kubalulekile ukufaka drive wokubacindezela. Lo msebenzi ilula. Lokhu kuzodinga bamba master isilinda, actuator ingalo, kanye ezimbili hose kusukela uhlelo ukubopha. Khona-ke, i-metal abilisiwe design akhethekile ngesimo indlu encane. Ngokufanele zisebenzisa steel mayelana 3 mm obukhulu. ukubopha actuator induku iqondiswa phambili futhi mfushane. Khona-ke wenza ubukhulu encane piston, okuyinto izobe ifakwe master isilinda. Lokhu kufanele kubandakanye yokupaka ukubopha piston induku. It kuphela uhlala ukuxhuma design. Hose kwe-circuit master isilinda uboniswa imoto. I element ixhunywe okukhipha kuqala uMbhalo bamba. Hose sesibili eya "umthakathi". Isikimu ilula, nakuba at efika kuqala kungase kube yinto esabekayo. Ngakho ngempumelelo qondanisa ezingemuva disc ukunqanda Vaz-2107 ne ibhuleki lesandla. Ngaphandle kwabhoboka yokupaka kuyinkinga ukusebenzisa imoto. Ikakhulukazi uma sikulungele yobuleza okhokhelwayo.
Phela le misebenzi kungenziwa kuphela opha amabhuleki. Endabeni a sesimanje ukudonsa kuzothatha isikhathi eside. Ukuze wenze lokhu, kumele ahlukanisa kwabhoboka yokupaka bawubeka uqotho. Lokhu uyoqeda emoyeni emaphaketheni. Brake uketshezi kungcono ukugcwalisa izinga lokushisa ukubila ephakeme. Ngezikhathi silondoloze ezingemuva disc ukunqanda Vaz-2107. Ukulungisa amasevisi afanayo yimuphi omunye izakhiwo efanayo.